Shiinaha oo oggolaaday tijaabooyin caafimaad oo lagu daweynayo fayraska Corona – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Shiinaha oo oggolaaday tijaabooyin caafimaad oo lagu daweynayo fayraska Corona
Shiinaha oo oggolaaday tijaabooyin caafimaad oo lagu daweynayo fayraska Corona
Shiinaha ayaa dhowaan oggolaaday tijaabooyin caafimaad oo laba tallaal ah oo lagu daweynayo fayraska Corona, wakaaladda wararka ee Reuters ayaa werisay horaantii Talaadada.
Wakaaladda wararka ee Xinhua ayaa soo xigatay wakaaladda wararka ee Xinhua in mas’uuliyiinta caafimaadka ee Shiinaha ay heleen iftiinka cagaaran si ay u bilaabaan tijaabooyinka aadanaha ee laba tallaal si loola dagaallamo fayraska corona ee soo ifbaxaya, kaas oo dilay ku dhawaad ​​120,000 oo qof oo adduunka ah.
Tallaallada waxaa soo saaray Shiinac Biotech oo ku taal magaalada Beijing, iyadoo lala kaashanayo Machadka Wuhan ee Alaabooyinka Bayoolojiga, oo ay hoos tagto Shirkadda Qaranka ee Shiinaha ee Daawada.
Bishii Maarso ee la soo dhaafay, Shiinaha wuxuu siiyay iftiinka cagaaran si loo tijaabiyo tallaal kale oo loogu talagalay fayraska dilaaga ah, oo ay soo saareen Akademiyada Cilmiga Caafimaadka ee Shiinaha iyo shirkadda “Cansino Bio”, wax yar ka dib markii shirkadda horumarinta daroogada ee Moderna ay ku dhawaaqday bilowga tijaabooyinka aadanaha ee tallaalka fayraska dilaaga ah iyadoo lala kaashanayo Machadka Caafimaadka Qaranka ee Mareykanka.
Warbixinta maalinlaha ah, Wasaaradda Caafimaadka ee Shiinaha ayaa Talaadadii sheegtay in ay diiwaan galisay 89 xaaladood oo cusub oo ah coronavirus, marka la barbar dhigo 108 maalintii hore.
Komishanka Caafimaadka Qaranka ayaa ku waramay in 86 ka mid ah kiisaska cusub ee dadka ay ka yimaadeen dibada, kana hooseeyeen 98 maalintii hore.
Raadiyaha iyo Telefishanka Shiinaha ayaa sheegay in waqti ah
Horey, 79 ka mid ah kiisaska soo gala waxay ku sugnaayeen gobolka waqooyi-bari, oo xuduud la leh Ruushka.
Tani waxay tirada guud ee kiisaska corona ee Shiinaha ka dhigaysaa 82,249, halka tirada dhimashadu ay xasilisay 3,341, iyadoo aan la soo sheegin wax dhimasho ah oo cusub, shalay.
Kiisaska la xaqiijiyay ee ku soo kordha coronavirus-ka ayaa taabtay laba milyan oo kiis adduunka, sida laga soo xigtay Sky News, oo lagu dhawaaqay horaantii Talaadada.
Ku dhawaad 600,000 kiis oo Covid-19 ah ayaa laga helay Mareykanka, sida lagu sheegay tirooyinka ay soo aruuriyeen Jaamacadda Johns Hopkins.
Previous articleDawlada Djabouti ayaa shaacisey 65 kiis oo cusub oo ay ka heshay COVID19.
Next articleCiidamada Cirka ee Ethiopia oo sheegey duqeyn ku dileen saraakiil Alshabab ah
Farmaajo oo kulan Wada-tashi la qaatay Guddiga Qaran ee Dhab-U-Heshiisiinta iyo...